तथ्यांकमा यस्तो छ दोस्रो चरणको निर्वाचन – Halkaro
काठमाडौँ । पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको तीन सात वितिसकेको छ । पहिलो चरणको निर्वाचन भएका ३४ जिल्लाका २८३ स्थानीय तहमध्ये २८२ स्थानीय तहका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले काम गर्न थालिसकेका छन् । भरतपुर महानगरमा विवादका कारण मतगणना स्थगित भएको छ भने निर्वाचन अायोगले वडा नं. १९ मा पुन मतदानको निर्णय गरेको छ ।
दोस्रो चरणको निर्वाचन अन्यौलमा रहे पनि असार १४ गतेका लागि तयारी भइरहेको छ । दोस्रो चरणको निर्वाचन हुने ४ वटा प्रदेशमा दलहरू उम्मेदवार टुंगो लगाउँदै मतदातासमक्ष मत माग्न व्यस्त छन् भने अर्को तर्फ मतदाता मतदानका लागि व्यग्र प्रतिक्षामा छन् ।
यसपटको निर्वाचनमा पहिलो चरणको निर्वाचनमा भन्दा झण्डै दोब्बर मतदाताले अाफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्दै छन् । त्यस्तै दोब्बर जनप्रतिनिधि पनि छनोट हुँदै छन् । दोस्रो चरणको निर्वाचनमा ९० लाख ९७ हजार ५५७ मतदाताले अाफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्दै छन् । पहिलो चरणको निर्वाचनमा यो संख्या ५० लाख १३ हजार १६० थियो ।
यसपटक चार प्रदेशका ४६१ स्थानीय तहमा२१ हजार ३५२ जना प्रतिनिधि निर्वाचित हुँदै छन् । यी प्रतिनिधि छनोटका लागि ६ हजार ७१८ मतदान स्थलमा ११ हजार ९३१ मतदान केन्द्रमा मतदानको व्यवस्था मिलाइँदै छ । प्रदेश नं. १, २, ५ र ७ का ४३ जिल्ला (प्रदेश विभाजनमा रूकुम र नवलपरासी टुक्रिएर दुर्इ थपिँदा जम्म ७७ जिल्ला हुँदा)का ४६१ स्थानीय तहका ४ हजार ८६ वटा वडाहरूमा निर्वाचन हुने छ । जसमध्ये २९३ गाउँपालिका, १५६ नगरपालिका, २ महानगरपालिका (हालै थपिएका वीरगञ्ज र विराटनगर), १० उपमहानगरपालिकामा निर्वाचन हुँदैछ ।
प्रदेश अनुसार कस्तो तथ्यांक
उपमहानगर पालिकाः २
जम्मा वडाहरूः ११५७
जम्मा स्थानीय तहः १३७
मतदान स्थलः ८६१
जम्मा मतदान केन्द्र ३४५९
कुल मतदाताः २६,७४,५६३
जम्मा वडाहरूः १२१२
जम्मा स्थानीय तहः १२७
मतदान स्थलः २१३७
जम्मा मतदान केन्द्र ३५६७
कुल मतदाताः २६,६४,७९२
जम्मा वडाहरूः ९८३
जम्मा स्थानीय तहः १०९
मतदान स्थलः १६१२
जम्मा मतदान केन्द्रः ३१२५
कुल मतदाताः २४,५४,४८८
उपमहानगर पालिकाः १
जम्मा वडाहरूः ७३४
जम्मा स्थानीय तहः ८८
मतदान स्थलः ११०८
जम्मा मतदान केन्द्र १७८०
कुल मतदाताः १३,०३,७१४
← दुबर्इमा नेपाली युवतीको हत्या
भरतपुर–१९मा काग्रेस माओवादीको संयुक्त चुनावी सभा →